दमकमा पहिलाे पल्ट कम्प्यूटर प्रविधिबाट शल्यक्रिय शुरू - Limbuwan khabar
दमकमा पहिलाे पल्ट कम्प्यूटर प्रविधिबाट शल्यक्रिय शुरू
शुक्रबार, २६ मंसिर, २०७७ बिहानको ०७:५१ बजे, लिम्बुवान न्युज
वि.सं. २०५४ साल देखि दमकको पाथिभरा नेत्रालयबाट आफ्नो पेशागत कार्य सुरु गरी झापाको विभिन्न ठाउँमा रही आखाँ बिरामीहरुको उपचार सेवामा निरन्तर लागिरहनु भएका डा. राईको टोलिले दमकमा पहिलो पटल अत्याधुनिक कम्प्यूटर प्रविधिद्वारा शल्यक्रिया सेवा सुरु गरेको हो ।
नेत्रालयले पहिलो दिन ५ जना मोतिबिन्दु र १ जना आँखाको ढकनि गरि जम्मा ६ जनाको सल्यक्रिया गरिएकाे डा. राईले बताउनुभयो ।
प्रत्येक हप्ताको आइतबार र बिहिबार आँखाको पर्दा (रेटिना) सम्बन्धी सेवा सुरु भएको हो । गत आइतबार देखि सुरु भएको सो सेवा बिहिबारबाट सल्यक्रिया सेवा समेत सुरु भएको अस्पताल प्रशासक प्रमुख पुनम प्रधानले बताइन् ।
सुगर, पेसर, बढि उमेर भएका मानिस र चोट लागेर आँखाको पर्दा च्यातिएमा आँखाको रेटिना सम्बन्धी समस्याहरु बढि मात्रामा आउने गरेको डा. राईले बताउनुभयो ।
मेचीनगरको काकरभिट्टा देखि सो सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको मेची नेत्रालयले अब अत्याधुनिक प्रविधिबाट बिना सिलाइ आँखाको पर्दा सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू दमकबाट पनि प्रदान गर्ने भएको छ ।